काठमाडौं। १० वर्षे जनयुद्धको बेलामा द्वन्द्वरत माओवादी पक्षले सबैभन्दा बढी मठमन्दिरहरु भत्काए। धर्मकर्म गर्नेहरुलाई पनि लखेटे। कतिपयको जनै च्यात्नुका साथै हत्या पनि गरे। नेपालका कम्युनिष्टले कहिल्यै पनि पुजाआजा गर्ने छैनन् भन्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई पाठ सिकाएका प्रचण्डहरु नै अहिले आफैं धर्मकर्ममा…
नेपालमा न्याय प्रणालीको सुरुवात प्रधानन्यायालय २०१३ को स्थापना पश्चात सुरु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको स्थापना र न्याय व्यवस्थाको सुरुवात भएको इतिहास छ। अझ भरपर्दो र सुनिश्चित हुने प्रकारको न्यायालयको संरचना नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ ले गरेको हो। जुन ढंगले देशमा…
बुद्ध गौतम जंगबहादुर त्यस्तो होईन की जसले आफैं नियम बनाओस् र आफै तोडोस् वुद्ध त्यस्तो होईन की जो नाम मात्रको ढोंगी बुद्ध होओस्। हामी नेपालीहरुको इज्वत, मर्यादा, शान र स्वाभिमान भन्ने के नै पो अब बाँकी रह्योर अब, सबै माटोमा…
रिधी (कल्पना) आचार्य के.सी. काठमाडौं । समय वलवान छ भन्ने सुनेकी थिएँ र आज आएर आफैलाई यो कुराको मिठो अनुभुति भइरहेको छ । भरखरै नेपालीहरुको महान् चाड वडा दशै सकिएको छ । गलेकोे शरीरले केही सहजता महसुस गरिरहेको छ भन्दा…
बिहानै कोरियन लाहुरे र अमेरिकन लाउरेसँगको टेलिफोन कुराकानीले खलबलियो मेरो निद्रा
शेर साङबो शेर्पा सौल कोरिया । शनिवार बिदा बिहान १० बजेसम्म सुत्छु भन्ने सोचाई थियो। शुक्रवार बेलुका कम्पनीले कामदारहरुलाई पार्टी दिएको थियो । पार्टी खाएर साथीसँग सुख दुखको कुरा गर्दै रातिको २ बजेसम्म बसे । त्यसपछि बल्ल सुतेको थिए। एक्क…
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हो। यो नारालाई सार्थक बनाउन इच्छशक्तिका साथै आर्थिक रुपमा पनि मजबुत हुन आवश्यक छ। तर पछिल्लो समय मुलुकमा बैदेशिक लगानी निकै कम हुँदै गइरहेको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेका छन्। विदेशी सहयोग…
डिगबहादुर तामाङ्ग वासिङ्गटन डिसी, अमेरिका । दशैं भनौ, तिहार भनौ, तीज भनौ, क्रिसमस भनौ मन्नेलाईसास्ती खानेलाई मस्ती, ब्यापारीलाई नाफा बेकारीलाई रोजगारी, सरकारलाई कर को नाफा जनतालाई करको भारी। भन्दा केही नयाँ कुरा दिएको जस्तो लागेको छैन मलाई। हाम्रो मातृभूमी नेपालमा…
अनिल कार्की काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सी पश्चात् अन्ततः सोमबार मलेसिया सरकार र नेपाल सरकार बिच ऐतिहासिक श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो सम्भवत: सन् २०००देखी नै आफ्ना नागरिकहरुलाइ बिनाकुनै सम्झौता मलेसियालि श्रम बजारमा कामदारका रूपमा पठाउँदै आएको नेपाल सरकार माथी मलेसिया सँग श्रम…
केन्द्र र प्रदेशबीचको विवादले संघीयतामाथि खतरा !
संघीयता लागू भएसँगै देशमा विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरु देखिएका छन् । केही समयअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफूहरुलाई अधिकार नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्ति गरेका थिए । नेपानमा पहिलोपटक संघीयताको अभ्यास भइरहेकोले यो नयाँ अभ्यास अन्योलपूर्ण छ । त्यसमाथि कुनै पनि देशमा नभएको…
फेसबुक र इन्टरनेटले भुलायो संसार
बुद्ध गौतम रामेछाप । त्यही इन्टरनेटको प्रयोगगरि मार्क जुकरबर्ग आज विस्वको पाँचौ नम्बरको धनी व्यक्ति बन्न सफल भए । आज उनको सम्पति ७१ बिलियन डलर पुगेको छ। गुगलका फाउण्डर लैरी पेज पनि इन्टरनेटकै प्रयोगबाट विस्वको १२ औ नम्बरको धनी व्यक्ति…
बालिका बलात्कार गर्नेलाई मर्नेगरि कोर्रा हानियो, त्यसपछि ५ बर्षको जेल सजाय(भिडियो)
शाहरुखको फिल्म जीरोको दोस्रो गीत रिलिज, भिडियोमा कट्रिनाको बोल्ड अवतार
सुन्दरताको अर्को नाम हुन् नवजोत सिंह सिद्धूकी छोरी राबिया, हेर्नुहोस् १० तस्वीर
शाहरुखकी छोरी सुहानाले टाइट ड्रेसमा शेयर गरिन् हट फोटो, बेकाबु भए युवक
'सेक्स फेस्टिभल' बन्द गर्ने चेतावनी, कार्यक्रममा आउने विदेशीलाई तत्कालै समातिने (भिडियो)
चलचित्र 'प्रसाद'ले कति कमायो ? (भिडियो रिपोर्ट)
डाेटीका उच्च लेकाली क्षेत्रमा हिमपात
सत्य खोज्न आफैं जुटे द्वन्द्व पीडित
काङ्ग्रेस महासमिति बैठक आजदेखि, विधान परिमार्जन मुख्य एजेण्डा
सुबिसुधाको ‘धेरै पछि आज फेरी’ बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजजिक
कलङ्की–महाराजगञ्ज सडक विस्तारका लागि अध्ययन शुरु
डोटीमा फैलियो खोरेत रोग
दोगडाकेदार गाउँपालिकाले दियो स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता
घ्याङफेदी मिनीट्रक दुर्घटना अपडेट : मृतकको सङ्ख्या २० पुग्यो १५ घाइते